Baarlamaanka oo ogolaaday codsiga Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya – Radio Muqdisho
Baarlamaanka oo ogolaaday codsiga Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha Shacabak ee magaalada Muqdisho ayaa ogolaaday codsiga Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ee ahaa in muddo toban cisho ah la siiyo si uu u soo dhameystiro golaha Wasiirada.
Shirka Baarlamaanka ee maanta oo uu shir guddoominayay Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ay soo xaadireen 230 Xildhibaan ayaa waxaa hortagay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, oo ka codsaday in uu soo dhameystirayo golaha Wasiirada oo uu gaarsiin doono 25 Wasiir, isla markaana inta ka dhiman Wasiirada uu soo dhameystiri doono.
Ra’iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in markii uu arkay xaaladda dalka uu ku jiro iyo in miisaaniyadda dowladda aanay ku saleysneyn Wasaaraddaha 20-ka uu soo magacaabay ay qasab noqotay inuu 10 cisho dalbado si uu Wasiirada, Wasiir kuxigeenada iyo Wasiiru dowlayaasha ku soo dhameystiro.
Dood dheer kaddib mudanayaasha Baarlamaanka ayaa cod u qaaday codsiga Ra’iisul wasaaraha, waxaana ogolaatay 139 Xildhibaanad, halka 47 Xildhibaan ay diideen codsigaas, waxaana natiijada ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo mar kale sheegay in Ra’iisul Wasaaruhu uu heysto 10 cisho dheeraad ah oo uu ku soo dhameystirayo Xukuumadiisa.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa laga sugayaa in Wasiirada magacaaban ee 20-ka ah, uu gaarsiiyo 25, isla markaana uu soo magacaabayo Wasiir ku-xigeenka iyo Wasiiru-dowlayaasha Xukuumadda Soomaaliya muddada tobanka cisho ah ee uu haysto.